Dị ka a Premiya igwe anaghị agba ígwè n'elu mmebe na China, Foshan Hermes (Hengmei) Steel Co., Ltd ike na 2006, nke na-agbalị maka igwe anaghị agba ígwè ọhụrụ na àgwà n'ihi na ihe karịrị 10 afọ. N'ihi ya, anya, anyị mepụtara n'ime a nnukwu integrated enterprise nke igwe anaghị agba nchara ihe onwunwe nke imewe, nhazi.
Ugbu a Hermes (Hengmei) Steel enwe aha ọma na nza nke mba.
India: Anyị malitere tụkwasị India ahịa kemgbe afọ 2010. Ugbu a, anyị na-enwe aha ọma na Mumbai, Chennai na Delhi, nza nke ndị ahịa na-ahọrọ Hermes àgwà.
Middle East: Na anyị ọkachamara ire otu mgbalị, ugbu a, anyị na-achịkọta ndị ọzọ na ndị ọzọ ahịa. All ahịa na-ama ghọrọ enyi Hermes Steel.
Onye kasị ukwuu architects na-emepụta n'ụwa nile họrọ Hermes Steel dị ka ezigbo onye ha oru ngo! Kpọtụrụ anyị, a na-egbuke egbuke ga-eme n'ọdịnihu nke anyị!
Ekwentị: + 86-757-63999930
Ekwentị: + 86-757-63999928